Ndịàmà nọ n’Eshia
MBA OLE DỊ NA YA 48
MMADỤ OLE BI NA HA 4,315,759,010
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 703,271
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 732,106
Ọ Jụrụ Ma Ndị Ọzọ Hà Nwere ike Iso ya Bịa
N’Indonisha, otu nwanna nyere onye na-arụ ọrụ n’ebe a na-adọba ụgbọala akwụkwọ e ji akpọ ndị mmadụ òkù ka ha bịa Ncheta Ọnwụ Jizọs. O nyere ya akwụkwọ ahụ abalị abụọ tupu e mee Ncheta Ọnwụ Jizọs. Nwoke ahụ bụ onye alakụba. Ọ jụrụ ma ndị ọzọ hà nwere ike iso ya bịa ebe e nyere ya naanị otu akwụkwọ ịkpọ òkù. Nwanna ahụ gwara ya na ndị ọzọ nwere ike iso ya bịa. Nwoke ahụ kwuru ka e nyekwuo ya akwụkwọ ahụ n’ihi na ndị ezinụlọ ya hiri nne. Nwanna ahụ nyeziri ya iri abụọ, gwakwa ya na onye ọ bụla nwere ike ịbịa ma Onye Kraịst ma onye alakụba. Nwoke ahụ kwuru na ya ga-akpọrọ ihe dị ka mmadụ iri isii ma ọ bụ iri asaa bịa.
Obere oge e bidoro ikwu okwu Ncheta Ọnwụ Jizọs, nwoke ahụ kpọ ihe dị ka otu narị mmadụ bịa, ma ụmụaka ma ndị toro eto ma ndị agadi na otu nwaanyị dị ime ọmụmụ. Mgbe ha rutere, narị mmadụ abụọ na iri anọ na asatọ anọrọla na-ege ntị. Ọ bụ ụgbọala butere nwoke ahụ na ndị ọ kpọ bịa na họtel a nọ mee Ncheta Ọnwụ Jizọs. Mgbe ndị na-eche họtel ahụ nche hụrụ ka ha kwo na-abịa, ha ekweghị emepere ha ụzọ. O juru ha anya ihe mere ọtụtụ Ndị Alakụba ji bịa ihe Ndị Kraịst. Mgbe ha gosiri ha akwụkwọ e ji kpọọ ha òkù, ha mepeere ha ụzọ, kpọrọkwa ha gaa n’ebe a na-ekwu okwu. Tupu ha erute, ime ụlọ ahụ ejula. Ọ bụzi naanị ihe dị ka mmadụ iri isii n’ime ha batara.
Mgbe abalị ole na ole gachara, nwanna ahụ gaghachiri na nke nwoke ahụ jụọ ya ma ihe ndị e mere ọ̀ tọkwara ha ụtọ. Nwoke ahụ kwuru na ihere nọ na-eme ha, mana obi dị ha ụtọ n’ihi otú e si kelee ha mgbe a gbasara. Nwanna ahụ gwakwara ya ka ọ bịa gere okwu ihu ọha pụrụ iche a ga-ekwu na Sọnde na-eso ya. Nwoke ahụ kpọ ihe dị ka mmadụ iri anọ bịa. Mgbe ha rutere, ọ fọziri obere ka a gbasaa ọmụmụ ihe. N’ihi ya, ndị okenye kpebiri ka ekwughachi okwu ihu ọha ahụ. Onyeisi oche kwuru isiokwu okwu ihu ọha ahụ, kwuo ka a bụọ abụ, kpeekwa ekpere. Mgbe nwanna kwuru okwu ihu ọha ahụ na-ekwu ya, o ji okwu Ndị Alakụba ahụ bịara ọmụmụ ihe ga-aghọta kwuo ya. Dị ka ihe atụ, ihe ọ nọ na-akpọ Baịbụl bụ “Akwụkwọ Nsọ,” na-akpọkwa “Jizọs,” “Ịsa onye amụma.”
Otu okenye mechara gaa na nke nwoke ahụ na-arụ n’ebe a na-adọba ụgbọala mụwara ya Baịbụl. Akwụkwọ ha na-amụ bụ akwụkwọ Gee Chineke Ntị. Mmadụ iri na abụọ ọzọ sonyeere ha na-amụ Baịbụl. Ụfọdụ n’ime ha bụ ụmụ nwaanyị ndị alakụba na ụmụaka.
Akwụkwọ Ndị Nọ na Bọs Ga-agụ
Mọngolịa: Ebe ụmụnna na-etinyere ndị njem magazin ha ga-agụ
N’obodo Ulaanbaatar, nke dị na Mọngolịa, e nwere bọs ndị na-esi na ya aga ebe dị iche iche ná mba ahụ. Ụdị njem ahụ nwere ike iwe ihe dị ka ụbọchị abụọ. Naanị ihe ndị nọ n’ụgbọala na-eme bụ ịna-elepụ anya ma ọ bụ ịna-ehi ụra. E nweghị akwụkwọ ọgụgụ ọ bụla a na-edowere ha n’agbanyeghị na ndị Mọngolịa na-enwe mmasị ịgụ akwụkwọ. N’ihi ya, ụfọdụ ụmụnna nọ n’ọgbakọ Sọnginokaịkan gakwuuru ndị na-akwọ ụgbọala ndị ahụ, sị ha: “E nwere ọmarịcha akwụkwọ anyị chọrọ inyetụ unu. N’ụgbọelu, a na-edowe akwụkwọ ndị nọ na ya ga-agụ n’akpa a rụnyere n’oche. Ọ bụrụ na unu chere na ndị unu bu n’ụgbọala ga-enwe mmasị ịgụ akwụkwọ, anyị nwere ike itinyere ha akwụkwọ n’akpa a rụnyegasịrị n’azụ oche.” Mmadụ asatọ n’ime ndị ahụ na-akwọ ụgbọala kwetara. Nke a mere ka ụmụnna anyị nyefee magazin dị narị abụọ na iri itoolu na itoolu na broshọ dị otu narị na iri anọ na anọ. Ha na ndị ahụ na-akwọ ụgbọala kwekọrịtakwara na ha ga na-ewepụ magazin ndị ochie, tinye ndị ọhụrụ ma ha nweta ha.
Ha Chere na Ọ Bụ Ya Ka Ha Na-achọ
N’otu mba dị n’Eshia, a gwara ndị okenye abụọ ka ha gaa leta otu nwanna nwaanyị kwụsịrị ije ozi ọma kemgbe afọ asatọ. Ha ahụtụbeghị nwanna nwaanyị ahụ. N’ihi ya, ha kpọrọ ya n’ekwentị, ya agwa ha bịa ebe ọ na-ere ahịa n’ime ahịa. Mgbe ụmụnna anyị gagharịgidere na-achọ ya, ha mechara hụ otu ụlọ ahịa nọmba ya yiri nke nwanna nwaanyị ahụ. Mgbe ha banyere, ha hụrụ otu nwaanyị ebe ahụ. O kelere ha, Baịbụl dịkwa n’elu oche ya. Ụmụnna abụọ ahụ jụrụ ya aha nna ya, onye ebe ọ bụ, na afọ ole ụmụ ya abụọ dị. Mgbe ọ gwachara ha ya, ụmụnna anyị ahụ echee na ọ bụ ya ka ha na-achọ. Ha gwara ya, sị: “Anyị bụ ụmụnna gị Ndịàmà Jehova.”
Nwaanyị ahụ gwara ha na ya bụ Onye Kraịst. Ihu ya gosikwara na ọbịbịa ha bịara gbagwojuru ya anya. Ihe a o mere abụghị ihe ụmụnna anyị tụrụ anya ya. N’agbanyeghị nke ahụ, ha nyere ya akwụkwọ anyị ụfọdụ, ya anara ma kelee ha. Ma, mgbe ha na-ala, ha chọpụtara na ebe ahụ ha gara abụghị ebe ha bu n’obi ịga. Ebe ha kwesịrị ịga bụ n’ụlọ ahịa nọmba ya bụ 2202, ma ha gara na nke 2200. Otu n’ime ha kwuru, sị: “Otú ahụ́ si mee m yiri ka ndị mmụọ ozi hà na-agwa anyị banye n’ụlọ ahịa ahụ. Nwaanyị ahụ na nwanna anyị nwaanyị ahụ na-aza otu aha nna, ha sikwa n’otu obodo, ụmụ abụọ ha bụkwa ọgbọ. A sị na aha nna nwaanyị ahụ dị iche, ma ọ bụkwanụ na obodo ya dị iche, anyị gaara ama na ọ bụghị ya ka anyị chọtara.” Mgbe ụmụnna anyị ahụ gafere ụlọ ahịa abụọ, ha hụrụ nwanna nwaanyị ahụ ka ọ na-eche ha.
“Ọbịbịa ha metụrụ m n’ahụ́ n’ihi na o gosiri na Jehova echefubeghị m n’agbanyeghị na o teela m kwụsịrị ijere ya ozi”
Ọbịbịa ụmụnna anyị bịara na nke nwaanyị mbụ ahụ mere ka ọ mụwa Baịbụl, bịawakwa ọmụmụ ihe. Nwanna nwaanyị ahụ bidokwara bịawa ọmụmụ ihe ozugbo, na-agachikwa ozi ọma anya. Ọ sịrị, “Ọbịbịa ha metụrụ m n’ahụ́ n’ihi na o gosiri na Jehova echefubeghị m n’agbanyeghị na o teela m kwụsịrị ijere ya ozi.”
Ha Na-eji Ekwentị Ezipụ Ozi n’Udu Mmiri
Filipinz: Ebe Nwanna Greg ji ekwentị na-ezigara mmadụ ozi
Nwanna Greg na nwunye ya Alma kwagara n’agwaetiti a na-akpọ Katandụanis, nke dị na Filipinz n’ihi na a chọkwuru ndị ga na-ekwusa ozi ọma na ya. Ebe ụfọdụ n’obodo ahụ bụ ugwu ugwu. N’ihi ya, Nwanna Greg na nwunye ya na-eji ụkwụ aga ihe dị ka kilomita iri na itoolu tupu ha eruo ebe ụfọdụ ha ga-ekwusa ozi ọma. E nwekwara mgbe ha na-akwọ ụgbọ mmiri awa abụọ tupu ha eruo ebe ndị ọzọ ha ga-ekwusa ozi ọma. N’oge udu mmiri, ọ na-esiri ha ike ịga ebe ndị ahụ. Ma di na nwunye a anaghị achọ ịnọ nkịtị n’oge ahụ. N’ihi ya, ha malitere iji ekwentị ha na-ezipụrụ ndị mmadụ ozi. Ihe na-enyere ha aka bụ na ụlọ ọrụ nzipụ ozi na-ekwe ka ndị ahịa ha jiri ekwentị na-ezipụrụ ndị mmadụ ozi ugboro ole ha chọrọ n’ụbọchị n’ọnụ ego dị ala.
Nwanna Greg kwuru na ihe mbụ ọ na-eme ma o dewe ozi ọ ga-ezipụrụ mmadụ bụ ide aha nke ya. O dechaa, ya edeekwa, sị, “O nwere ihe dị na Baịbụl m chọrọ ịkọrọ gị.” Otu ebe na-enyere ya aka bụ Jọn 17:3. Ọ na-edere onye ahụ ihe e kwuru ebe ahụ, o dechaa ya, ya ajụọ onye ahụ ajụjụ abụọ. Nke mbụ bụ, Ònye bụ ezi Chineke? Nke abụọ bụ, Ònye bụ Jizọs Kraịst? Ọ jụchaa onye ahụ ajụjụ ndị ahụ, ya agwa ya zaa ihe o chere. Onye ahụ zaa, ya ezigara ya ihe e dere n’Abụ Ọma 83:18. Ọ bụrụ na onye ahụ ana-azaghachi ya, ọ na-ajụ ya ma ọ̀ ga-achọ ka ha na-ekwurịta okwu n’ekwentị. Nwanna Greg na nwunye ya kwuru na ọtụtụ ndị na-ekweta.
Otu nwaanyị Nwanna Greg na nwunye ya na-ezigara ozi nwere ọtụtụ ajụjụ ọ chọrọ ka ha jiri Baịbụl zaa ya. Nke a mere ka ha zigara ibe ha ozi ugboro ugboro. E mechakwara mụwara nwaanyị ahụ Baịbụl. Nwaanyị ahụ kụziiri nwa nwanne ya na onye ya na ya na-arụ ọrụ ihe ndị ọ mụtara na Baịbụl. E mechara mee ha atọ baptizim.